Home Horyaalka Ingiriiska Mohamed Salah oo ka fikiraya inuu ka tago Liverpool
Weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah ayaa lagu soo waramayaa inuu ka fiirsanayo suurtogalnimada inuu ka tago Anfield xagaagaan.
28 jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed xoogan kujira Reds xilli ciyaareedkan inkasta oo ay kooxda dhibtoonaysay, wuxuu dhaliyay 24 gool 37 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, oo ay kujirto 17 gool 26 kulan oo Premier League ah oo uu ciyaaray.
Salah kaliya labo sano ayaa uga harsan inuu qandaraaskiisa kula sii joogo kooxda Jurgen Klopp , si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqata inuu ku jahwareersan yahay markii la bedelay kulankii Chelsea ee horyaalka habeenkii Khamiista.
Barcelona iyo Real Madrid ayaa labadoodaba la sheegay inay yihiin kuwa jecel ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Masar, inkastoo aysan u badneyn inay midkood awoodi doonaan inay lasoo saxiixdaan xagaagan sababo la xiriira saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus.
Sida laga soo xigtay Eurosport, Barca ayaa laga yaabaa in xidigan soo qaadayo hadoo Lionel Messi uu ku biiro Kooxfa PSG.
Salah, oo la sheegay inuu doonayo isbedel Cusub, ayaa dhaliyay 118 jeer wuxuuna diiwaangeliyay 45 caawin 189 kulan oo uu u saftay Reds tan iyo markii uu ka yimid Roma xagaagii 2017.
Previous articleReal madrid oo soo xulatay safka ay kaga hortegeyso Athletico madird.
Next articleTababaraha kooxda Bayern Munich Hansi Flick oo sheegay in Haaland ay macquul tahay in Bayer munich ay la wareegto.